Urgent Disease Alert kune Vashanyi muWaikiki kuHilton Grand Vacations | Nyika | Dunhu
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Urgent Disease Alert kune Vashanyi muWaikiki kuHilton Grand Vacations
Nyika | Dunhu • Enda • Hawaii • utano • nhau • USA
Urgent Disease Alert kune Vashanyi muWaikiki kuHilton Grand Vacations
Iyo COVID-19 emergency yave kuda kupera muHawaii neMugovera, asi nhasi Dhipatimendi rehutano reHawaiʻi (DOH) riri kuferefeta nyaya mbiri dzechirwere cheLegionnaires muvaenzi vakagara The Grand Islander naHilton Grand Vacations iri muWaikiki.
DOH inoziva nezvenyaya mbiri dzakasimbiswa dzevagari vasiri veHawaiʻi vakawanikwa vaine chirwere cheLegionnaires mushure mekugara kuGrand Islander. Mhosva yekutanga yakaonekwa muna Chikumi 2021 uye yechipiri yakaonekwa munaKurume 6 kana 7, 2022.
Chirwere cheLegionnaires imhando yemabayo inokonzerwa neutachiona hweLegionella. Chirwere cheLegionnaires hachipararire kubva kumunhu kuenda kumunhu. Pane kudaro, utachiona hunopararira nemhute, dzakadai sekubva kune air-conditioning units yezvivakwa zvikuru. Vanhu vakuru vane makore anopfuura makumi mashanu uye vanhu vane immune system isina simba, chirwere chemapapu chisingaperi, kana kuputa fodya zvakanyanya ndivo vari panjodzi. Vanhu vazhinji vakafumurwa nebhakitiriya havaite zviratidzo. Avo vanotanga zviratidzo vanogona kuona chikosoro, fivha, kupindwa nechando, kutadza kufema zvakanaka, kurwadza kwetsandanyama, kutemwa nemusoro, uye kuita manyoka. Chirwere cheLegionnaire chinogona kurapwa nemishonga inorwisa mabhakitiriya.
About 1 kubva pagumi rega rega vanhu vanorwara nechirwere cheLegionnaires vanozofa nekuda kwekunetsekana nehurwere hwavo. Kune avo vanobatwa nechirwere cheLegionnaires panguva yekugara munzvimbo yezvoutano, anenge 1 pa4 voga voga anofa.
“Kunyange zvazvo njodzi kuvanhu vose yakaderera, zvirwere zveLegionnaires zviri kuwedzera munyika yose,” akadaro State Epidemiologist Dr. Sarah Kemble.
Vanhu vakagara paHilton Grand Islander muWaikiki mumavhiki maviri apfuura ..
..vanoita zviratidzo kana vanhu vakaonekwa kuti vane chirwere cheLegionnaires mushure mekugara kuGrand Islander vanokurudzirwa kutsvaga kurapwa uye kuonana neDOH.
Chirwere cheLegionnaires imhando yemabayo inokonzerwa nekusangana neutachiona hweLegionella.
Zviratidzo zvechirwere cheLegionnaires zvinosanganisira kukosora, kutadza kufema zvakanaka, fivha, kurwadza kwetsandanyama, nemusoro. Zviratidzo zvinowanzotanga mukati memazuva maviri kusvika gumi nemana ekuonekwa. Vanhu vazhinji vane hutano vakasangana neLegionella bacteria havaiti chirwere cheLegionnaires. Avo vari panjodzi yakawedzerwa vanosanganisira vanhu vane makore makumi mashanu zvichikwira, varipo kana kuti vaimboputa fodya, uye vanhu vane chirwere chemapapu chisingaperi kana kuti immune system isina simba.
Mabhakitiriya eLegionella anowanikwa munzvimbo dzine mvura yakachena uye anogona kupararira mumasisitimu emvura akadai semashowerheads nemapombi ekunyura, shongwe dzekutonhodza, mabhavhu anopisa, uye masisitimu makuru epombi.
Mabviro chaiwo ehurwere nehuwandu hwekupararira kwacho zvichiri kuferefetwa. DOH iri kushanda pamwe chete neGrand Islander kuchengetedza hutano hweveruzhinji uye kutenda kuGrand Islander nekushanda pamwe chete.
Dhipatimendi rehutano muHawaii rakapa chikumbiro kumasangano ehutano munyika yose kuti ataure nyaya dzechirwere cheLegionnaires ane nhoroondo yekufamba kuenda kuHawaii.
Mutauriri weHilton Grand Vacations, pagwaro rekambani, haakwanise kutaurwa zita eTurboNews.
“Bazi rezveutano reHawaii rakazivisa Hilton Grand Vacations kuti munhu achangobva kushanyira Honolulu akabatwa neLegionella paakadzokera kumba. Munhu uyu akagara kuThe Grand Islander, Hilton Grand Vacations Club. Chikwata chedu chiri kutevera nhungamiro yese kubva kuHawaii Dhipatimendi reHutano neCenters for Disease Control and Prevention sekuferefeta kwakanyatsoitwa. Hutano nekuchengetedzeka kwevaridzi vedu, vashanyi, uye nhengo dzechikwata ndizvo zvatinokoshesa zvikuru. Nepo kuferefetwa kuri kuenderera mberi uye hazvisati zvazivikanwa kuti munhu uyu akatapukirwa sei kana kupi, kubva mukungwarira kwakawanda, tiri kutora matanho akati wandei kuti tive nechokwadi chekuchengetedzwa kwemunhu wese, kusanganisira kupisa tembiricha yehurongwa, iyo yakapedzwa Kurume 23. -chemical process haina kukuvadza uye inongosanganisira kuwedzera tembiricha yemvura kune masisitimu kuThe Grand Islander. "
Zvimwe pa: Covid-19 | Hilton | utano | Hawaii | Waikiki
Kumirira mumutsara kuCanada Airports utano|
Seychelles inorasa mutemo wemasiki ekunze Covid-19, utano|
Kukurumidza Kukwira Kwekune dzimwe nyika Hiring muUK utano|
Canada Inoedza Kuderedza Airport Kumirira Nguva utano|
GVB uye DPHSS shamwari yemahara COVID yekuyedza yevashanyi Covid-19, utano|
Covid-19 Hawaii utano Hilton Waikiki
Vanuatu Inopinda Mukuvhara Ichiri Kuitisa Chiitiko Chekufamba
Hyatt, Marriott, IHG, Hilton, Radisson, Wyndham anobva kuRussia ane Rudo.
India Tourism Inoisa Nzvimbo dzayo paMafungu Akavhurika
Nzvimbo gumi dzepamusoro pasi rose dzakachengeteka dzezororo remhuri
French Montana kuita kuIsle yeMTV Malta 2022
Iva neChirimo Chisingaperi muMalta
RESET 2022: Revolution uye kwete Evolution ndeye...
Seychelles inorasa mutemo wemasiki ekunze